मार्किङको तयारी फेल खायो, लकडाउन मोडलबारे सरकार नै अलमलमा - 761खबर.com
मार्किङको तयारी फेल खायो, लकडाउन मोडलबारे सरकार नै अलमलमा
वैशाख १२ , काठमाडौं - वैशाख ४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय र कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित विज्ञहरूले निष्कर्ष निकालेका थिए, अब लकडाउनको मोडल फेर्नुपर्छ, आशंकित समुदाय सिल हुन सक्छ । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालकै अगुवाइमा भएको त्यो छलफलले तत्काल गर्नुपर्ने दुई कामको सूची पनि बनाएको थियो । पहिलो, आशंकित समुदायका पूरै मानिसको र्‍यापिड टेस्ट गर्नुपर्छ । यसरी जाँच गर्दा कसैलाई पोजेटिभ देखियो भने पूरै समुदाय सिल गर्ने र सबैको पीसीआर विधिबाट जाँच गर्नुपर्ने छलफलको निष्कर्ष थियो । नेपालमा कोरोना संक्रमण तेस्रो चरण प्रवेश गरेको हुनेसक्ने आशंका भएकाले र्‍यापिड टेस्ट गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारी र विज्ञ टोलीको निष्कर्ष थियो । दोस्रो काम, परीक्षण नतिजाका आधारमा रेड, एल्लो वा ग्रिन जोन मार्किङ गर्ने । रेड जोन निर्धारण गरेको क्षेत्रमा लकडाउन कडा बनाउने, एल्लो जोनमा अलिक खुकुलो बनाउने र ग्रिन जोनमा झन् खुकुलो बनाउने छलफलको निष्कर्ष थियो । तर, त्यसको भोलिपल्ट एकैदिन १४ जना कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का संक्रमित थपिए । उदयपुरमा १२ जना र चितवनमा दुई जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारको आकलन फेल खायो । त्यसयता उदयपुरमा मात्र संक्रमितको संख्या २८ पुगेको छ भने सर्लाही, भोजपुरमा पनि संक्रमित भेटिएका छन् । यसैगरी, धेरै ठाउँमा गरिएको र्‍यापिड टेस्टमा पोजेटिभ रिपोर्टहरू पनि आएका छन् । विज्ञ टोलीको छलफलले निष्कर्ष निकालेझै आरडीटी पोजेटिभ देखिएको समुदायमा सबैको पीसीआर जाँच गरिएन । रेड एल्लो र ग्रिन जोन पनि तोकिएन । जबकि पूर्वनिर्धारित लकडाउन १५ गते आउन अब चार दिन मात्र बाँकी छ । त्यसोभए १५ गतेपछि लकडाउन के हुन्छ ? कायम रहन्छ वा यसको मोडल फेरिन्छ ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग कुनै जवाफ छैन, बरु अलमलमा छन् । उदयपुरको पछिल्लो घटनाले सेफ जोन मार्किङ गर्ने/नगर्ने अलमल सृजना गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्की बताउँछन् । पछिल्लो पटक थपिएका संक्रमणले ४ वैशाखको निष्कर्ष पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको उनले सुनाए । धनगढीमा एकैपटक स्थानीयसहित तीन जना संक्रमित भेटिएपछि सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सबैभन्दा जोखिम क्षेत्र मानेको थियो । त्यसअनुसार सबै जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा र्‍यापिड टेस्ट गर्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मीहरूको थप टोली पनि पठायो । तर, एकाएक उदयपुरको भुल्के हटस्पट बन्यो । त्यसैले अहिले नै सुरक्षित स्थान तोक्दा हतार हुने निष्कर्षमा सरकारी अधिकारीहरू पुगेका छन् । डाक्टर कार्की भन्छन्, ‘अहिले हामी एक्सनमै छौँ । लकडाउनबारे विज्ञहरूको नयाँ सुझाव नआएसम्म केही भन्न मिल्दैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरू पनि सुरक्षित क्षेत्र तोकेर त्यहाँ लकडाउन केही खुकुलो बनाउन सक्ने बताउँछन् । तर, कुन क्षेत्रलाई रेड, एल्लो वा ग्रिन भनेर छुट्याउने भन्ने अलमल छ । त्यसैले अहिले नै सुरक्षित क्षेत्र छुट्याउन हतारो हुनसक्ने भन्दै मन्त्रालयको एक अधिकारीले अब एक हप्ता लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्न नहुने बताउँछन् । लकडाउन खुकुलो बनाउने मनसायका साथ मन्त्रालयले पूर्वतयारी पनि गरेको छैन । उनी भन्छन्, ‘लकडाउन कसरी खुलाउने भन्ने मापदण्ड तयार नभएकाले अहिले नै केही भन्न सकिन्न ।’ उच्चस्तरीय समिति निष्कृय
कोरोना नियन्त्रणका लागि विशेष टोलीमा खटिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले बनाएको कोभिड-१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति अहिले निष्कृय जस्तै छ । जबकि संक्रमितको संख्या भने हरेक दिन बढिरहेको छ । यस्तो बेला समितिले द्रूत गतिमा काम गर्नुपर्ने हो । तर, समिति आफैँ निस्कृय जस्तो देखिएको छ । अब कसरी काम गर्ने ? अबको रणनीति के ? भन्ने विषयमा पनि निर्णय नभएको भन्दै एक अधिकारी भन्छन्, ‘कोरोनासम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गर्ने भनिएको छ । तर, समितिले कुनै नयाँ निर्देशन नदिँदा काम गर्न अलमल छ ।’ उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल हुन् । सो समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालगायत छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘समितिका सदस्यहरू देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा अझिँदा कोरोना नियन्त्रणको काम नै अलमल भयो ।’ परीक्षण नबढाइ कसरी सेफ जोन छुट्याउने ? यो समाचार तयार पार्दासम्म नौ हजार एक सय ११ जना पीसीआर र ३४ हजार पाँच सय दुई जनाको र्‍यापिड टेस्ट भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर, सेफ जोन छुट्याउन यो परीक्षण संख्या अपुग हुने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् । जीवाणु वैज्ञानिक समीरमणि दीक्षित सेफ जोन छुट्याउन धेरैभन्दा धेरै आशंकित समुदायमा पीसीआर परीक्षण नै गर्नु पर्ने बताउँछन् । आशंकित समुदायका अधिकांश मानिसहरूलाई पीसीआर परीक्षणको दायरामा नल्याई सेफ जोन मार्किङ गर्न नहुने भन्दै उनले भने, ‘अब अवस्था हेरेर लकडाउन खुलाउनु पर्ने बहस गर्न जरुरी छ, तर र्‍यापिडको भरमा निर्णय गर्नुहुन्न ।’ लकडाउनको प्रभावलाई न्यूनीकरण सकारात्मक पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अर्का विज्ञ बताउँछन् । उनकाअनुसार लकडाउनले दिएको सास्तीलाई घटाउँदै संक्रमण नफैलिने बाटो सोच्नुपर्छ । भन्छन्, ‘टेस्टको दायरा बढाउँदै खतराको घण्टी बजेको ठाउँ लकडाउन कडा बनाउने र कम खतरा भएको ठाउँमा मापदण्ड बनाएर लकडाउन केही खुकुलो बनाउनुपर्छ ।’ तर, पूर्णरुपमा लकडाउन हटाउन नहुने उनको बुझाइ छ । अनलाईन खवरका अनुसार, ‘अबको केही वर्षसम्म कोरोनाको डर रहिरहन्छ, त्यसैले लकडाउन कसरी खुलाउने भनेर राज्यले नै बहस गर्ने बेला भने भइसकेको छ ।’